KNU အရေးပေါ် ဗဟို အမြဲတမ်းကော်မတီ အစည်းအဝေးမှ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်? - Yangon Media Group
KNU အရေးပေါ် ဗဟို အမြဲတမ်းကော်မတီ အစည်းအဝေးမှ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်?
ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာ ၉
KNU သည် အရေးပေါ်ဗဟို အမြဲတမ်းကော်မတီအစည်းအဝေးတစ်ရပ်ကျင်းပပြီး ငြိမ်းချမ်း ရေးနှင့်စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်မှုအချို့ကို ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း KNU ၏ တရားဝင်ထုတ် ပြန်ချက်အရသိရသည်။ KNU (ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး) ၏ (၁၆)ကြိမ်မြောက် ကွန်ဂရက်အပြီး ပထမအကြိမ်အရေးပေါ်ဗဟိုအမြဲတမ်း ကော်မတီအစည်းအဝေးကို အောက်တိုဘာ ၄ ရက်မှ ၇ ရက်အထိပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အောက်တိုဘာ ၉ ရက်က တရားဝင်ထုတ် ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အရေးပေါ်အစည်းအဝေးတွင် KNU အနေဖြင့် တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲ ရေးဆိုင်ရာ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအား ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း(Peace Process Review) မှ ရရှိလာသည့် သုံးသပ်ချက်များအပေါ် ပြန်လည်ချပြဆွေးနွေးခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
ထို့အပြင် ကြားကာလဆိုင်ရာမူဝါဒများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာသဘောထားများ၊ အမျိုးသားအဆင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့် လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖြစ်တည်ရှိနေသည့် နိုင်ငံရေးအခြေအ နေတို့ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက် အရသိရသည်။ အရေးပေါ်ဗဟိုအမြဲတမ်းကော်မတီ အစည်းအဝေးမှ လက်ရှိ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်အပေါ် ပိုမိုကောင်း မွန်သည့်နိုင်ငံရေးချဉ်းကပ်မှုများဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရေး၊ အဖွဲ့အစည်းအတွင်း တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို စနစ်တကျ ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားရန်၊ လက်တွေ့ရင်ဆိုင်နေရသည့် ကြားကာလဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများကို ဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက် မူဝါဒလုပ်ငန်းစဉ်များကိုရေးဆွဲ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော် ပြထားသည်။ ထို့အပြင် အရေးပေါ်ဗဟိုအမြဲတမ်း ကော်မတီအစည်းအဝေးတွင် စီးပွားရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ စီမံကိန်းများကိုဆွေးနွေးခဲ့ပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ပြည်သူလူထုကို ကြီးကြီးမားမားထိခိုက်လာနိုင်သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့် အဆင့်မြင့်နည်းပညာအသုံးပြု စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို အကာကွယ်ပြု နိုင်သည့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများမရှိသေး သောကာလတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုပြုလုပ်ရန် အချိန်မကျသေးဟုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
KNU အနေဖြင့် နယ်မြေအတွင်းရှိ သစ်တောကြိုးဝိုင်းများ၊ တိရစ္ဆာန်ဘေးမဲ့ တောများအတွင်းဝင်ရောက်ပြီး သစ်ထုတ် လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်မှုတို့ကို KNU သစ်တောဌာန၏မူဝါဒလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အညီ ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ကာကွယ်စောင့် ရှောက်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်သွားမည်ဟုဆိုသည်။ KNU တပ်မဟာနယ်မြေ (၄) မြိတ်၊ ထားဝယ်ခရိုင်၏နယ်မြေအတွင်း အမျိုးသားဥယျာဉ်၊ သစ်တောကြိုးဝိုင်းသတ်မှတ်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းအတွက် ဝင် ရောက်လုပ်ကိုင်မှုများသည် လက်ရှိငြိမ်းချမ်း ရေးတည်ဆောက်ဆဲကာလတွင် အခက်အခဲ ဖြစ်လာသောကြောင့် ထိုလုပ်ငန်းများနှင့်ပတ်သက်ပြီး မိမိတို့၏မူဝါဒကို အခြေခံကာ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သွားမည်ဟု လည်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ KNU (၁၆)ကြိမ်မြောက် ကွန်ဂရက်မှ ချမှတ်ထားသောရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အညီ စစ်မှန်သော ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် အကောင်အထည်ဖော်မှုများကို ဖော်ထုတ်ကာ သက်ဆိုင်သူများအကြားတွေ့ဆုံ ညှိနှိုင်းအဖြေရှာသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း ထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ KNU (ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး)၏ (၁၆)ကြိမ်မြောက်ကွန်ဂရက်အပြီး ပထမအကြိမ်အရေးပေါ် ဗဟိုအမြဲတမ်း ကော်မတီအစည်းအဝေးသို့ ဗဟိုအမြဲတမ်း ကော်မတီဝင် ၅၅ ဦးရှိသည့်အနက် ကော်မတီဝင် ၄၇ ဦးနှင့်အထူး ဖိတ်ကြားသူနှစ်ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ရန်ကုန် မြို့ပတ်ရထားနှင့် ရေကြောင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး စနစ်ကို အဆင့်မြှင့်တင် ဆောင်ရွက်မည်
တရားမဝင် မြန်မာလုပ်သားများ အတွက် အထောက်အထား ထုတ်ပေးနေမှု ဒီဇင်ဘာလကုန် အထိသာ ပြုလုပ်ပေးမည်
မြန်မာဘက်မှ လက်ခံရေးစခန်းများ အဆင်သင့်ဖြစ်နေသော်လည်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက်မှ ပြန်လည်နေထိုင်လိ??
အနည်းဆုံးလုပ်ခတိုးပြီး ကုန်ထုတ်စွမ်းအားမတိုးမည်ကို လုပ်ငန်းရှင်များစိုးရိမ်ဟုဆို
မာတစ်ကို ခံစစ်မှူးနေရာ ထားကစားခဲ့ရခြင်းကို မော်ရင်ဟို ရှင်းလင်း
ကလေးငယ် ခြောက်သိန်းကျော်ခန့်က ကလေးလုပ်သားများ အဖြစ် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေရကြောင်း အစီရင်ခံစာ ထ